Health Archives - Yuyalay
ကင် ဆာ ထိေ တာင် ပျောက်ကင်းနိုင်ပြီး ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ မီးယပ်ရောဂါနဲ့ လေးဖက်နာတွေအတွက် အစွမ်းထက်တဲ့ လက်ပံပွင့် အ ညာေ ဒ သ များမှာပေါက်လျှက်သော”လက်ပံပွင်’အမျာပေါက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ အညာဒေသ အေ ခါ အဝေါအမျိုးမျိုရှိကြပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဒေသများတွင်”လက်ပံပွင်’အနည်းအများအလိုက်ပေါက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ကျမတို့ […]
သွေးလွန်တုပ်ကွေး ကို ကုသပေးမဲ့ သင်္ဘောရွက်
သေ င်္ဘာ ရွက် က ဘာလို့ သွေးလွန်တုပ်ကွေးကို ပျောက်ကင်းစေတာလဲ တ ကယ် ကိုမေးသင့်တဲ့မေးခွန်ပါပဲ။ သင်္ဘောရွက်မှာ Papain နဲ့ Chymopapin စတဲ့ အစွမ်းထက် အင်ဇိုင်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ Platelet လို့ခေါ်တဲ့ သွေးမွှာဆဲလ်တွေကို […]
“အသက်ကြီး လို့…. ယောက်ျား ၊မိန်းမ ဝဖြိုးလာပြီး ….ဗိုက်ကြီးပူ လာခြင်းကို …..သက်ရင်းကြီးမြစ် နဲ့ …ရှင်းစို့ …!”
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် အ သက် ကြီးလို့ ယောက်ျား၊မိန်းမ ဝဖြိုးလာပြီး ဗိုက်ကြီးပူလာခြင်းကို သက်ရင်းကြီးမြစ်နဲ့ ရှင်းစို့ …! သက် ကြီး လာလျှင် ယောက်ျား မိန်းမ ဝဖြိုးလာပြီး ဗိုက်ကြီးပူ လာခြင်းမှာ သဘာဝ […]
ငွေတွေ အများကြီးအကုန်ခံပြီး ကျောက်ကပ်ဆေးနေရတဲ့ ဝေဒနာရှင်များတွက် သတင်းကောင်လေးမို့ ရှဲပေးပါ…!
သူငယ်ချင်းများ အားလုံး share ပေး ကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံ ချင်ပါတယ် ။ (ကွမ်းစားတဲ့သူ ကားသမားအချင်းချင်းမို့ လက်တို့လိုက်တာပါ။) ကွမ်းစားသူများ ခဏခဏ ကျောက်ကပ်ဆေးနေရတဲ့ ဝေဒနာရှင်များ ကျောက်ကပ်လဲရမည့်သူများ ကတက်ခေါက်ကို သတိရပါလေ သူငယ်ချင်းများ […]
ဆန်ဆေးရေအစွမ်းနဲ့ ကိုယ်အ​လေးချိန် ပေါင် ၂၀၀ ခန့် ၀ိတ်ချခဲ့သူ ဒေါက်တာလှဝင်းအောင်၏ ကိုယ်တွေ့ ၀ိတ်ချနည်း.. နိုင်ငံတော်မှ ဘွဲ့ဆုတံဆိပ်များစွာ ချီးမြင့်ခြင်း ခံထားရသူ ဒေါက်တာလှဝင်းအောင်က အဘိဓမ္မာ ဆရာတစ်ဦး၊ လူမှုရေးအလုပ်များစွာ လုပ်ဆောင်သည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအဖြစ် လူသိများသူဖြစ်သည်။ […]
အဖွားဖြစ်နေတဲ့ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ လက်တွေ့သက်သာပျောက်ကင်းတဲ့ ဆေးနည်းလေး ဝေမျှပေလိုက်ပါတယ်…!
ဆေးနည်းလေးမျှဝေပေးမယ်နော်။ အမှန်တော့ မတင်ချင်ပါဘူး။ အဖွားဖြစ်နေတဲ့ရောဂါလူသိမှာစိုးလို့မတင်ချင်ပါဘူး။ ဆေးနည်းလေးမျှဝေပေးမယ်နော်။ အမှန်တော့ မတင်ချင်ပါဘူး။ အဖွားဖြစ်နေတဲ့ရောဂါလူသိမှာစိုးလို့မတင်ချင်ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်မှဘယ်လောက်ခံရခက်တဲ့ရောဂါလဲဆိုတာ သိရတယ်။ ကိုယ့်လိုရောဂါတူ မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းကိုယ်ခြင်းစာမိတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ကုသိုလ်ယူတဲ့အနေနဲ့ဆေး နည်းလေးမျှဝေပါတယ်ရှင်။ ဆေးနည်းမညွန်းမှီ ရောဂါအခြေနေခန့်မှန်းလို့ရအောင် အရင်ပြောပြမယ်နော်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက် ၂၀ […]
သဲခြေကျောက်တည်နေတာကို မခွဲလိုက်ရပဲ ကောင်းသွားတဲ့နည်းလေးမို့ မျှဝေပါရစေ…!
သဲခြေကျောက်တည်နေတာကို မခွဲလိုက်ရပဲ ကောင်းသွားတဲ့နည်းလေးမို့ မျှဝေပါရစေ ကိုယ်တွေ့ဆေးကောင်းတစ်ခွက် လမ်းညွှန်ပါစေ။ ဆေးသုံးလေးကြိမ်လောက်စစ်ဖူးတယ်။ ပထမဆုံးဆေးစစ်ရတော့အက်ထရာဆောင်းရိုက်တာ သဲခြေကျောက်တည်နေတာတွေ့လို့ဆရာဝန်ကခွဲမလားပြောတယ်။ မခွဲဘဲနေလို့ရသေးလားဆိုတော့ ရသေးတယ်၊ဆေးစားလို့တော့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့မပျောက်ဘဲ ကြီးလာရင်တော့ မင်းဆေးရုံတက်ခွဲရမယ်လို့ပြောတယ်။ ဒါနဲ့မခွဲသေးဘဲ ဆေးစားမယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်တယ်။ fame ကထုတ်တဲ့ကျောက်ပျော်ဆေးကိုစားကြည့်တယ်၊ ၂ လလောက်တော့ […]
ခြေစွယ်ငုတ်ခြင်းက ခံရခက်ပြီး ကုသလို့ အမြစ်မပြတ်ပဲ ပြန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့တွေဆို မျက်ရည်ကျသည်ထိ လှီးဖြတ်ပြစ်ကြပြီး ဆီချက်ပူ လောင်းထည့်တာမျိုးလည်း မြင်ဘူးပါတယ်။ နောက်တော့ ပြန်ဖြစ်တာပါပဲ။ ခု ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်နည်းလေးက မနာမကျင်ပဲ ခြေသည်းဟာ တစ်ဖြေးဖြေး ပြန့်လာပြီး နောက်ထပ် […]
လက်ဖဝါးမှာ Xပုံစံ သင်္ကေတလေးပါနေရင် သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို သိထားဖို့လိုပြီ…!
မင်းဟာ လက္ခဏာဗေဒင်ကို ဝါဿနာပါသူလား။ ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အကြောင်းကို သိရမယ်ဆိုရင် လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားကြမှာပါ။ တစ်ချို့ ဟောချက်တွေက မှန်တာတွေလည်းရှိသလို ၊ အချို့ ဖြစ်မလာတဲ့ ကိစ္စလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ ယုံကြည်သူဖြစ်စေ ၊ မယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ ဒီလို လက်ဖဝါးမှာပါတဲ့ X ပုံစံလေးရဲ့ […]
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ယင်းမာပင်​တိုက်​နယ်​တွင် ကလေးသုံးမွှာပူးအား အောင်​မြင်​စွာမွေးဖွားနိုင်​
By YuYalaYPosted on May 19, 2019
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ယင်းမာပင်​တိုက်​နယ်​တွင် ကလေးသုံးမွှာပူးအား အောင်​မြင်​စွာမွေးဖွားနိုင်​ အောင်​မြင်​ ​အောင်​​မွေးဖွား​ပေးခဲတဲ့ ဆရာacc ဖြစ်​ပါတယ်​ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး သာစည်​မြို့နယ်​ ယင်းမာပင်​တိုက်​နယ်​ ပြည်​သူ့ဆေးရုံကြီး၌ ကလေးသုံးမွှာပူးအား အောင်​မြင်​စွာမွေးဖွားနိုင်​ ယင်းမာပင်​အုပ်​စု မဒါန်းကျေးရွာနေ ကိုအောင်​ဇော်​ထက်​၏ဇနီး မနန်းလှိုင်​ဝင်း၏ သုံမွှာပူးကိုယ်​ဝန်​အား ယင်းမာပင်​တိုက်​နယ်​ […]